Swiss: Yaan la kordhin lacagta saacadii - BBC News Somali
Swiss: Yaan la kordhin lacagta saacadii
Image caption Codaynta lacagta ugu yar ee qofka uu ku shaqeeyo saacadii.
Switzerland ayaa ah dal maciishaddu ay qaali tahay, waxaana shaki la'aan ah in ay adag tahay in magaalooyinka waaweyn uu qofku ku noolaado wax ka yar 15 Euro muddo hal saac ah.
Balse in haatan la billaabo hirgilinta lacagaha ugu yar ee qofku uu mushaar ahaan u qaadan karo guud ahaan dalka Switzerland sida tuulooyinka, magaalooyinka waaweyn iyo ganacsiyada ayaa dadka cod-bixiyayaasha ahi ula muuqata tallaabo aad u weyn.
Waxaa kale oo jira in iyada oo shirkadaha dalkaasi ay ogyihiin walaaca laga qabo farqiga weyn ee u dhaxeeya dadka ladan iyo kuwa dan-yarta ah ay haddana billaabeen jaan-goynta lacagaha ugu yar ee qofku uu mushaar ahaan u qaadan karo, heer gobol.
Balse arrinta mushaaraadka ayaa ahaan doonta arrin ku weyn ajendooyinka siyaasadeed ee dalkaasi.
Sanadkii hore ayaa dadka dalkaasi Switzerland, waxa ay taageereen dhimis lagu sameeyay lacagaha gunnooyinka ah ee ay qaataan madaxda, arrinta xigtana waxa ay haatan tahay cod guud ahaan dalka oo dhan loo qaado dakhliga aasaasiga ah ee qof kastaa oo qaan gaadh ah uu heli karo haddii ay shaqeeyaan iyo haddii kaleba.